Wareegtada Camey ragaadin Gaas mise rafasho siyaasadeed?. W/Q Khadar Awl Ismail | Caroog News
Wareegtada Camey ragaadin Gaas mise rafasho siyaasadeed?. W/Q Khadar Awl Ismail
Waa markii u horeysey oo khilaaf noocan ahi ama heerkaas gaara oo aan waxba la isu reeban soo kala dhexgalo Madaxweyne iyo kuxigeenkiisa tan iyo dhismihii Puntland.
Inkastoo dhawr mar ay is maan dhaafeen Madaxweyne Cabdilaahi Yuusuf iyo Maxamed C Xashi labadoodaba alle ha u naxariistee hadana waxay ahaayeen kuwo xalistay arimahooda.
6 bilood kadib doorashadii Gaas iyo Camey ee 2014 ayuu soo shaac baxay khilaafkii u horeeyey ee labada masuul xiligaasoo la isku qabtay hab maamulka maaliyada ee Eng Camey oo Gaas saluugey sida wax loo maareeyey mudo uu ku maqnaa mid kamid ah safaradii ugu dheeraa ee uu dalka kaga baxay markii la doortay kadib Madaxweyne Gaas.
Wixii intaa ka danbeeyey waxaa jirey khilaaf marba meel joogey oo la odhan karo wuxuu ahaa baaxaa deg siyaasadeed mar shiiqayey marna ladhka iyo lurka kharaar kor u kacayey.
Heer uu doonaba ha joogee maanta wuxuu soo gaarey halkii u danbeysey oo u muuqata inaan waxba la isula harayn (Neef gawracan geedo kama leexdo).